Ny fianjerana ara-toekarena izay nambara mialoha dia tonga: Merry Christmas: Martin Vrijland
Tsy vitan'ny hoe izaho Desambra lasa teo ny faminaniany fa hianjera ny toekarenan'ny Amerikana (ary noho izany). Izaho koa nanao izany nandritra ny fifidianana Donald Trump. Ny fitomboan'ny tahan'ny zanabola, ny banky foibe amerikana, tamin'ny herinandro lasa, dia toa efa nahazo ny fanosehana farany. Ny tsenam-bola dia nidina volana maromaro ary tsy misy fanantenana intsony.
Nolazaiko fa ny Trump dia hampiasaina hampidirana ny bozaka trosa ateraky ny banky foibe. Ny fampindramam-bola, an-jatony tapitrisa dolara an-jatony, izay natolotra ho an'ny orinasa lehibe tsy misy liana, dia nampiasaina nandritra ny taona maro mba hividianana ny anjarany manokana, mba hahatonga ny toekarena ho toa tsara. Raha ny marina, ny olona dia mijery ny fifanakalozam-bola amin'ny ankapobeny ho toy ny firoboroboana ara-toekarena. Foana daholo izany rehetra izany. Ny fiakaran'ny vidin-javatra dia tsy mifototra amin'ny valim-pifidianana ataon'ny orinasa, fa fotsiny ny vokatry ny fividianana ny azy manokana amin'ny 'vola maimaim-poana'. Azo trandrahana amin'izao fotoana izao ny trompetra ho toy ny meloka noho ny zavatra noforonin'ny banky foibe, fa izany no asany.
Mpiondana fotsiny ny mpanao politika amin'ny lalao lehibe. Tao amin'ny lahatsoratra maromaro, dia nanazava indray aho fa ny empira amerikana (planina) dia voaheloka ho faty. Hahita fiovana goavana isika, izay hanomboka hamerenana indray ny fanjakan'i Ottoman. Efa naminavina izany koa aho nandritra ny taona maromaro (talohan'ny nanoratako azy io). Izany dia hiaraka amin'ny fahaverezan'ny fahefana amerikana.
Efa saika lavitra izany. Nanantena ny 2018 ny volana novambra aho, saingy nanitatra sy nitohy nandritra ny fotoana fohy. Na izany aza, manisa ireo firenena Venezoeliana manomboka any Etazonia; ho an'i Eoropa. Ny kitapom-batsy dia henjana mafy. Ary any amin'ny toerana iray hianjera, ny hafa goavam-be dia hitsangana amin'ny taon-jato matory. Ny Empira Ottoman dia eo ambanin'ny Erdogan amin'ny faran'ny fifidianana an'i Eoropa. Voalohany indrindra anefa, ny korontana dia tokony haka tahaka izany ihany koa. Eo ambanin'ny Erdogan isika dia mahita rafitra miaramila toy izany any Torkia, araka ny hitantsika tamin'ny XIX-XIX tamin'ny taompolo farany teo, teo ambanin'ny Adolf Hitler tany Alemaina.
Natao avokoa ny zava-drehetra. Teo ambanin'ny Adolf Hitler, ny alibi dia noforonina ho fananganana ny fanjakan'i Isiraely ao Palestina. Ilaina ny ady amin'ny tontolon'ny Miozolomana amin'ny volo. Izany koa dia ho tonga amin'ny fara tampony amin'ny vanim-potoana ho avy. Miaraka amin'ny herisetra avy any Etazonia, dia hiankina kokoa amin'ny tenany ny Isiraely. Manahirana ihany koa ny fisamborana ny OTAN.
Izany rehetra izany dia mifanaraka tanteraka amin'ny alàlan'i XenxX an'i Albert Pike, izay naminaniany ady lehibe telo tao amin'ny taratasiny ho an'i Giuseppe Mazzini mpiara-mitory taminy. Ny roa voalohany amin'izy ireo dia tanteraka. Ny fahatelo dia manangana, fa (tsy toy ny hoe mitory maro) fa tsy ady eo amin'ny OTAN sy Rosia. Ny Ady Lehibe fahatelo dia hiady manodidina an'i Jerosalema. Ity ady ity dia hitranga aorian'ny fisamborana an'i Eoropa an'i Torkia. Avy eo dia hifindra any Jerosalema ny kalifa Islamika eo ambany fitarihan'i Erdogan.
Mandra-pahatongan'izany dia mbola mety hihevitra isika fa ny Isiraely dia hanandrana hanangana indray ny tempoly. Izany rehetra izany dia ho voa amin'ny rivotra mandritra ny ady ara-pivavahana, araka ny faminaniana ao amin'ny asa soratry ny fivavahana. Izany dia midika ihany koa fa misy ny script vaovao.
Efa nitatitra nandritra ny taona maromaro aho fa ny 2023 dia angamba ny taona izay tsy maintsy naverina indray ny Fanjakana Ottoman. Vakio ity lahatsoratra ity ao amin'ny Zerohedge, mba hahita ny fanamafisana tamin'ity taona ity ary hanamafy ny anjara asan'i Erdogan. Raha hameno ny haben'ny asam-panarenana io fanjakana io, dia midika fa hanafika ny Isiraely. Ity no taona 4 ho avy.
Mandra-pahatongan'izany anefa, dia mila manahy momba ny toekarena iray mandripaka izahay mandritra ny fotoana fohy. Izany dia hitondra any amin'ny korontana tsy mbola nisy hatramin'izay. Ny hetsi-panoheram-bolo mavo dia fanandramana fotsiny. Raha ny marina; Heveriko fa mihetsika izao hetsika izao mba hamelezana ny lelafo. Ny lozam-pifamoivoizana ara-bola iray manontolo sy ny fihenan'ny dollar (miaraka amin'ny vidin'ny euro) dia hampitsahatra ny zava-drehetra. Midika izany fa ho hitantsika any Etazonia sy Eoropa ny zavatra hitantsika tany Venezoela tao anatin'izay taona vitsy lasa izay: ny rindrankajy sy ny toeram-pokonolona.
Tsy hafatra mahafinaritra momba ny Krismasy, fa efa naminavina an'io fotoana ela io aho mba hahafahanao manomana ny tenanao, raha tsy hoe maro ny mandinika an'i Martin Vrijland mpandinika fikomiana hafahafa. Tsy misy mampanahy: io fiakarana io dia nomanina ary tsy natao fotsiny ny hametraka fiovan'ny herinaratra, fa koa hampiditra rafitra ara-bola vaovao. Mety ho rafitra fandriam-bola crypto io. Na ny bitcoin na ny kintana iray manontolo dia tsy sarotra ny mametraka. Na ahoana na ahoana anefa, dia hahita ny sidina mankany amin'ny Bitcoin isika raha matahotra ny banky ny banky. Ary izany no hitranga dia tsy azo ovàna. Miantsena, mandoa vola (mizaka ny zom-pirenena). Fantatrao izany.
Araka ny fijeriko, izao no fotoana hihomehezana ary hanao izany indrindra mandritra ny vanim-potoana lava be, satria ny krizy ho avy dia henjana sy lalindalina kokoa noho ny teo aloha. Mandritra izany fotoana izany dia iriko ho toy ny turkey tsara ianao ary taona mahafinaritra. Mandra-pahatongan'izany, azafady, aza adino ny manohana ilay mpitondra hafatra amin'ny alalan'ny fanomezana na amin'ny maha-mpikambana azy.
Ny trosa trosa 250 iray tapitrisa manerantany, fotoana hanaovana famelezana sy fampidirana rafitra ara-bola vaovao?
Donald Trump sy ny faminaniana avy amin'i Daniel 7: 25 'ny tony talohan'ny tafiotra' Ny fifandraisan'i Stormy Daniels
Raha ny Trump no mitarika ny ady amin'ny sazy, dia mandray ny toerana misy ny dolara foana ny Yuan Shinoa
Tags: banky, banky, vatsim-pianarana, Centrale, fianjerana, krizy, Toe-karena, ara-toekarena, Featured, NIEZAKA, Federal Reserve, nianjera, Ottoman, manan-karena, VS
24 Desambra 2018 ao amin'ny 14: 21
Tsy ny Torkia ihany no hitsangana, fa ny atsinanana manontolo kosa dia hitsangana tahaka ny phoenix. Ny lalao Hegeliana ao amin'ny macro, Rosia, Shina ary Iran (Isiraely miafina any aoriana) dia be atao amin'ny fanamboarana ny lalana tranainy. Izany no ady tany Syria (Afganistana) ary ny toerana nahatonga ny OTAN no ratsy indrindra. Ity ilay drafitra McKinder, izay namboarin'i Zbigniew Brzezinski taty aoriana ary avy eo Al Qaeda / Isis dia niandoha, izay tsy nahomby tamin'izany. Ny fanaraha-maso ny kaontinanta Eurasiana dia tonga eo an-tanan'ny Atsinanana, ary eto Eo koa ny antso ho an'ny tafika Eraopeana. Hanjavona ny OTAN amin'ny fanesorana ny US ao Syria / Afganistana ary taty Turkey. Ny fiampangàna farany no hitantsika amin'ny fihantsiana ny Okrainiana ao amin'ny Ranomasin'i Azov, teo aloha MH-17 / 370 .. (Malezia koa nanatevin-daharana ny Iray Belt, Iray Road ..)
I Jerosalema no ho ivon-danja ao amin'ny Tontolo Vaovao, ny Etazonia sy ny Tandrefana dia ho tafiditra ao amin'ny rafitra Kominista vaovao (Kominisma) miaraka amin'ny sehatr'asa fanaraha-maso amin'ny daty manaraka (aorian'ny fianjeranana). Teraka ny teknolojia ary ny tanàna SMART dia hitifitra toy ny holatra miaraka amin'ny teofilo DARPA tech avy any andrefana (Talpiot).
24 Desambra 2018 ao amin'ny 14: 55
24 Desambra 2018 ao amin'ny 19: 32
24 Desambra 2018 ao amin'ny 19: 42
24 Desambra 2018 ao amin'ny 19: 44
25 Desambra 2018 ao amin'ny 10: 33
25 Desambra 2018 ao amin'ny 11: 26
Ity tapa-kazo ity no manapaka hazo, ny olana dia ny zavatra tadiavin'izy ireo hatao
Aza manary ny fahafahana atolotry ny krizy tsara
Mazava fa maniry ny hamoaka programa mora vidy kokoa ny elitika. Araka ny fijerin'ny elitika dia efa nahomby tsara ny andiam-panahin'ny QE manerantany ary maniry mafy ny hanitatra ny habeny sy ny haben'ny drafiny ho avy.
Raha ny marina, ny vola dia azo ampiasaina amin'ity rafitra ity, fa ampiasain'ny elitena ihany koa hividy mangingina. Azoko sary an-tsaina izao tontolo izao izay Miezaha hanana banky foibe boloky hazo, orinasa fatorana, ny fametrahana antoka, ny tena toetrany, fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny famokarana ny tombontsoa, ​​trano mijoalajoala, tetezana, fandefasana entana foto-drafitrasa, sy ny sara lalana.
Mba hanatanterahana ny fandaharan'asan'ny volavolan-dalàna tsy misy herisetra, ireo elitika ireo dia mila mamorona krizy iray aorian'ny iray hafa. Mijery ny fanodikodinam-bola ara-toekarena aho, ny fikorontanan'ny tsenam-bola, ny famolavolana ny volavolan-dalàna ara-jeopolitika, ary ny bubbles ho an'ny ampahany amin'ny planina.
28 Desambra 2018 ao amin'ny 21: 00
* Ny fifantohantsika dia tsy maintsy tazonina izay manangana indray ny rafitra aorian'ny fianjeran'ny fianjerana. Midika izany fa tsy manakana ny ivon'ny banky foibe midadasika tahaka ny FMI na ny BIS tsy ho lasa toekarena ara-toekarena eo amin'izao tontolo izao. Midika izany hoe ady lava sy sarotra izany. Midika izany fa ny rafitra miavona dia ny toe-karena sy ny famokarana any an-toerana, ireo olona mizaka tena izay manome ny filany manokana sy ny fanaovana varotra, ary ireo vondrom-piarahamonina mifototra amin'ny fanampiana sy ny fiarovana. Midika izany fa misy ady iray izay mihoatra noho ny ady.
25 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 39
Miala ny Matrix
26 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 49
Misaotra ny rohy, fa i Max Igan tsy tiako izany .. ao amin'ny tambajotran'i Icke sy Allen.
27 Desambra 2018 ao amin'ny 20: 03
Izao tontolo izao mihitsy no anao.
28 Desambra 2018 ao amin'ny 15: 04
Wilfred nanazava anay, ianao mazava ho azy fa eo amin'ny tena fiainana mitady fomba 3D amin'ity tany ity ny zava-misy ary ankehitriny manao amin'ny ambaratonga ambony astral 🙂
27 Desambra 2018 ao amin'ny 20: 04
28 Desambra 2018 ao amin'ny 15: 07
Mipetraka eto Mr. Wilfred mba hanosika ireo tranonkalan'ny Zionista fanta-daza toa an'i Gatestone sy Pamela Geller. Hadinonao i Rita Katz 😀
Mbola velona i Pamela, ankizilahy
27 Desambra 2018 ao amin'ny 20: 12
Tompon'andraikitra amin'ny 911 vaovao ny Mr.
28 Desambra 2018 ao amin'ny 20: 02
Ry vahoaka malala, tokony hitandrina ianao raha mahita tatitra toy izany ao amin'ny msm. Code teny QE
'QE dia tsy tokony ho fitaovana fototra'
Niditra tao amin'ny resaka nifanaovana tamin'ny gazety isan'andro ihany koa i Knot tamin'ny faran'ny EPP. Izy mitanisa ny vokatry ny vola politika fepetra, anisan'izany ny "fampihenana ny disparities eo amin'ny avaratra sy ny atsimo" sy "manohana ny ara-toekarena fanarenana."
Ny tahan'ny fahazoana maharitra dia mbola mijanona ambany amin'ny fividianana ny fatoran'ny Eglizy Central Bank (EZB). Amin'ity volavolan-dalàm-bola ity isam-bolana amin'ny 15 miliara, ny EKS dia manantena ny hampiroborobo ny toekarena. Hijanona ny 2019 amin'ny volana Janoary.
31 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 23
Tsara Salmon ianao!
30 Desambra 2018 ao amin'ny 14: 58
Tsy nahita ny youtube intsony aho, noho izany dia nandefa izany aho.
31 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 21
Vaovao fohy ara-toekarena. Ny orinasa zombie dia orinasa izay tsy dia mahasoa firy ny fandaniana. Tao amin'ny fanadihadian'ny BIS dia nampiseho fa tena ratsy ny orinasan'ny zombie tao 2015. 2015 dia mialoha ny hetsika Interest Hike. Raha tsy afaka manatontosa ny trosany izy ireo, alao sary an-tsaina ny fiovaovan'ny 6-volana LIBOR avy amin'ny 0.38% ho 2.9%. Eritrereto ange izany no hatao amin'izay orinasa izay tsy zombies avy eo amin'ny 0.38%, fa ankehitriny amin'ny 2.9%. Na ahoana na ahoana dia miomana amin'ny onjam-pahafatesana satria mihamaro ny orinasa mandoa ny trosan'ny trosa.
31 Desambra 2018 ao amin'ny 13: 37
31 Desambra 2018 ao amin'ny 19: 20
Maro ny olona mamaly eto, anisan'izany aho, ary maro amin'ireo mitsidika an'ity tranonkala ity no manao izany noho ny antony iray fantatry ny rehetra. Ny sasany dia mitazana satria mahatsapa fa lavo amin'ny harona izy ireo ary manana feon'ny fieritreretana ary ny sasany dia manahy tsy amin'antony ka tsy mibaribary ny hodiny. Saingy, hafaliana ihany koa ny olona mamaky fa ny mampatahotra dia ny fiarahamonintsika (antsoina hoe) ary i Martin dia manadihady fa efa enin-taona izao ho an'ireo liana.
Na ahoana na ahoana, rehefa nilaza aho fa ao anaty intro dia tiako homena an'i Martin ny fiderana lehibe fa, na dia teo aza ny feon'ny fieritreretana rehetra, ireny biby ireny dia namela ny lamosiny ho an'ny mpamaky rehetra hatramin'izao ary afaka mijery ny hambom-pony ity taona ity 2018.
Martin ny taona vaovao mahafaly ary ny rehetra (afa-tsy amin'ny tsy misy saina, tsy jesosy aho) ary taona vaovao tsara
3 Janoary 2019 ao amin'ny 13: 11
Misaotra namana mendri-piderana ary misaotra ny mpamaky sy ny mpamaky hafa.
Ho anareo koa dia taona mafy dia mafy ary manaja anareo amin'ny taratasy lehibe aho.
2 Janoary 2019 ao amin'ny 10: 59
Fohifohy. Ny faniriana tsara indrindra ho an'ny taona vaovao ho an'i Martin sy ireo mpitsidika rehetra!
Tsy natao ho an'ny andevo izay mihazona ny rafitra.
3 Janoary 2019 ao amin'ny 13: 06
Misaotra! Ianao koa! Ny taona nahafaly sy salama dia naniry.
5 Janoary 2019 ao amin'ny 18: 30
Hi Martin, tsy iriko ho taona tsara ianao, satria mbola tsy nanomboka ny taom-baovao. Manomboka amin'ny 1 Aprily. Efa voafitaka daholo isika rehetra .. 😉
Na dia izany aza, te-hisaotra anao aho noho ny lahatsoratrao tsara ho an'ny taona faran'ny herintaona. 😉
Hanohy hanohana anao amin'ny volamena aho amin'ny taona ho avy (izany no mbola tokony maro ny olona tokony hatao!). Tena manao izany tokoa aho. Lasa tena ilaina tokoa ianao (tranokala tena izy) izay mbola misy feo tsy miankina. Tohano mafy ianao ..
Ankoatra izany, azoko atao ny manoro ity tranonkala ity ho an'izay rehetra mamaky eto: http://redefininggod.com , izay misy ny sambo iraisam-pirenena ihany koa.
« Ny tsy fanarahan-dalàna vaovao dia tsy voajanahary (na ny fomba hafa manodidina?)
Hanomboka! Faly sy mahasalama 2019 ho an'ny mpamaky rehetra! »
Total visits: 13.163.634